Apple yekugadzira mitsara inodzosera misoro isiri pamutemo mamiriro ekushanda | IPhone nhau
Yakave nguva yakareba kubvira nhau dzerudzi urwu dzakanangana nekushandiswa kwevana vadiki kana zvisiri pamutemo mashandiro mumafekitori eApple yaive chingwa chezuva nezuva. Kwenguva yakareba, iyo Cupertino kambani inotarisa zvakadzama pane zvese zvine chekuita nemakambani ekugadzira emafekitori ayo kuChina uye ikozvino vari kuongorora mushumo wakaburitswa pafekitori yeQuanta Computer, mune vamwe vashandi vayo kumanikidzwa kushanda zvakawandisa nguva uye husina kufanira maawa emahusiku.
Ava vadzidzi vekudzidzira
Mune iyi nyaya mushumo wakapihwa svondo rapfuura neboka rinotsigira kodzero dzevashandi nevadzidzi, rakaratidza kuti Quanta "yakashandisa vadzidzi vazhinji vane makore 16-19" kuunganidza zvikamu zvewatchwatch yeApple, asi mashandiro aisaita. Mitemo yeChinese kana Apple pachayo uye ndosaka vakazvishora uye zvino Kubva Cupertino, izvo zvakaitika zviri kuongororwa.
Apple pachayo yakajeka mune izvi uye pave paine kuwongorora kwakawanda kunoitwa mumakambani anogadzira zvigadzirwa kudzivirira chaizvo izvi kuti zviitike. Mune ino kesi, vadzidzi vakati wandei vari kuratidzawo kuti chimwe chinhu changa chisiri kuitwa nemazvo pavakazivisa kuti zviitwa mumafekitori iwayo uye panguva idzodzo zvaive inofanirwa kupihwa kudzidza kubva kuchikoro kwavo (kuitambira panguva imwe chete nevamwe vavanodzidza navo) chimwe chinhu chisina kubvumidzwa neApple kwemakore ayo mumitsara yekugadzira.
Vadzidzi vakati wandei vakamanikidzwa kushanda zvisiri pamutemo kanenge maawa akati wandei emaawa masikati nehusiku, saka tine chivimbo chekuti Apple ichapindura zviito izvi zvine simba. Yadzo yegore rese mutoro wemutoro inoshuma inotsanangura zvakajeka kuti vashandi veaya mafekitori vanogona kushanda nguva yekuwedzera, asi nguva dzose nokuzvidira uye kuti kambani inofanirwa kupa mushandi zuva rakazara rekuzorora kwemazuva matanhatu ese ebasa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple yekugadzira mitsara inogadzira misoro zvakare yemamiriro asiri pamutemo ekushanda